Kedu ihe arụmọrụ nke Honda CR-V? Kedu ihe arụmọrụ nke Honda CR-V? - LFOTPP
Kedu ihe arụmọrụ nke Honda CR-V?
Ugbu a, ụgbọ ala kewapụrụ iche n'oge gara aga. N'oge a, ụgbọ ala ezinụlọ na-elebara arụmọrụ zuru ezu anya, ọ bụghị naanị oghere dị oke, kamakwa ọnụ ahịa ihu dị elu. Taa, anyị ga-eleba anya na Japanese SUV Honda CR-V. Ekwesiri ịlọ ụwa Honda CR-V, nke hụworo "onye ọrụ na-arụ ọrụ". N'ihi nsogbu mmanụ gara aga, Honda echetala 100,000 CR-Vs, nke bụ ihe na-agbawa obi na Honda. Ọ dabara nke ọma, ọ mechara laghachi, ma nye ndị na-agba ya azịza zuru oke.
Na mbido Honda, a na-ekwu na "zụta engine iji ziga ụgbọ ala", n'ihi na isi ihe Honda dị na injin ahụ, enwere ike ikwu na teknụzụ nke injin nọ n'ọnọdụ mbụ n'ụwa, ọtụtụ ụgbọ ala na-eji moto Honda. Ọ dị mma, ekwula okwu nzuzu, gaa na isiokwu ahụ.
Designmepụta akụkụ nke ihu dị n’ike n’ike. Ejiri ihe eji achọ mma chrome na-eme ka isi ihe na-ejikọ ya na akụkụ abụọ. Thekpụrụ ejiji adịghị iche na nke ugbu a, mana nkọwa ndị ọzọ siri ike.
N'ihe banyere nhazi, otu ihe eji eme elu nwere otutu ihe eji enyere anyi uzo ugbo ala, ma nwee ezigbo ihe eji abanye uzo mgbe uzo adighi adighi nma. Nke a ka dị mma nke ukwuu.
Enweghị mgbanwe dị ukwuu dị n'ime ahụ, nke gara n'ihu na ụdị ejiji dị ugbu a, mana mere obere mgbanwe na usoro na ihe nke njikwa etiti ahụ.
N'enye ya na injin 1.5T, ikike kachasị bụ 193 hp, ma jiri ntuziaka ọsọ nke 6 na CVT gearbox. Usoro ngwakọ i-MMD nke mebere injin 2.0L na moto abụọ ka jikọtara ya na igbe ozi CVT.
Na mkpokọta, ụgbọ ala ahụ dịtụ iche na nke ugbu a, mana nkọwa ndị ọzọ na-abawanye na nke ọzọ Ugbu a na njedebe nke afọ, a ga-etinyekwa ụkpụrụ VI nke mba ahụ n'ihe a na-ekwu, yabụ ọ ga-ejikwa ọkọlọtọ VI nke mba iji zute mmadụ niile. Ka anyị na-atụ anya ya ọnụ.
Pịa ma Zụta Ngwa ngwa Honda CRV na ndị ọzọ Ụgbọ ala Ngwa